वडा-वडामा बीपी सम्झदै स्याङ्जा, वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वप्रति आक्रोश - नेपालबहस
वडा-वडामा बीपी सम्झदै स्याङ्जा, वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वप्रति आक्रोश
| १८:२७:५३ मा प्रकाशित
२५ भदौ, स्याङ्जा । कोरोना भाईरसले मुलुकलाई चुनौती दिइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका आदर्श पुरुष बीपी कोइरालाको १०७ औ जन्मजयन्ती नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाले मनाएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण बन्दाबन्दी भएकाले नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाले सामाजिक दुरी कायम गरी हरेक वडामा मनाउने निर्णय अनुसार बीपी जयन्ती मनाएको हो ।
जिल्लाको ९७ वडामा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपीको सम्झना र उनले देखाएको बाटोको चर्चा गर्दै मनाइएको नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाले जनाएको छ । बीपीको नाम बेच्ने मात्रै काम भएको भन्दै बीपीले दिएको सिद्धान्त र नीतिलाई कांग्रेसले पछिल्लो समय भुल्दै जान थालेको कार्यकर्ताहरुले दुखेसो पोखेका छन् । बीपीले दिएको मार्ग निर्देशनलाई कांग्रेसले अक्षरस पालना गर्न नसक्दा कांग्रेस कमजोर हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै स्याङ्जाका कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वको आलोचना गरे ।
बीपीको नाम भजाउने काम मात्रै नेतृत्वले गर्ने अनि गुटको राजनीतिले बाटो लिने कामको अन्त्य नभए सम्म बीपीले खोजेको कांग्रेस नहुने जिल्लाका कार्यकर्ताहरुको भनाई थियो । विश्वले मानेका महामानव बीपी कोइरालाले देखाएको बाटो विर्सनु नै कांग्रेसको भविष्य प्रतिको चिन्ता हुन थालेको औल्याएका थिए । गुटै गुटमा अल्झिएर पाटी नै सकाउने खेल नेतृत्वतहबाटै हुन थालेको छ कांग्रेसका युवा नेता नेत्रप्रसाद पाण्डेले भने,“पाटी भन्दा व्याक्ति बलियो हुने परम्परा बस्नु संगठनका लागि दुर्भाग्य हो ।” गुटको राजनीति अन्त्य गरेर पदिय दायीत्वमा रहनेहरु सच्चिनु पर्ने आजको आवश्यकता हो उनले भने ।
व्याक्ति भन्दा पाटी बलियो बनाउने अभियानको थालनी भयो भने मात्रै कांग्रेस पाटीले जिवनतता पाउने पाण्डेको भनाई छ ।
कोभिड १९ को नाममा सरकारले गरेको भष्ट्रचारका चाङ्गैचाङग हुदा पनि कांग्रेसले एक शब्द पनि उच्चारण गर्न नसक्नु मुलुक र कांग्रेसका लागि घातक सावित भएको कार्यकर्ताको ठहर छ ।
बीपीका विचार आज पनि सान्र्दभिक छन् जब—जब मुलुकमा कांग्रेस कमजोर हुन्छ तब देश कमजोर हुन्छ भन्ने उदाहरण देखिन थालेको छ । त्यसै भएर कांग्रेस संसदीय व्यवस्थामा कम संख्यामा छ अर्का युवा नेता लक्ष्मण अधिकारीले भने,“पाटीलाई भन्दा व्याक्तिलाई हावी बनाउन खोज्दा परिणाम मुखी देखिएन ।” नेपाली जनताले आशा मानेको लोकतान्त्रिक पाटी कमजोर हुदै गर्दा सत्ताको उन्मादमा कम्युनिष्टहरु संस्थागत भष्ट्रचारमा उदृत भए उनले भने ।
बीपीको विचार र पाटीको नीतिलाई संस्थागत बनाउन नसक्दा देशभरीका कार्यकर्ता निरास भएको बताएका थिए । वडागत रुपमा बीपीलाई सम्झदै मनाइएको १०७ औ बीपी जयन्तीमा कार्यकर्ताले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सबै स्याङ्जावासीलाई आग्रह गरिएको थियो ।
स्याङ्जामा पहिरोले पुरिएर १० जनाको मृत्यु, एकको जीवितै उद्धार ! ३ दिन पहिले
अध्ययन टोली नफर्किदै चीनले सीमा नमिचेको भन्नु हतारो : कांग्रेस ३ दिन पहिले
स्याङ्जाको तमादी पहिरोमा परी ९ जनाको मृत्यु ३ दिन पहिले
स्याङ्जाको कालीगण्डकीमा पहिरोले पुरिएर एक जनाको मृत्यु ३ दिन पहिले
डा.केसीको जीवन रक्षा गर्न कांग्रेसको माग ४ दिन पहिले
डलर भन्दै कागजको पोको दिएर लाखौ लुट्ने खेलबहादुर र रेलबहादुरको गिरोह पक्राउ १० मिनेट पहिले
प्रदेश नं १ मा १८१ संक्रमित थपिए १४ मिनेट पहिले
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो “मेरी उनीलाई” मुद्दति खाता योजना २६ मिनेट पहिले
अर्थतन्त्रको बृद्धिदर शून्यको नजिक, अर्थविद् सोचमग्न ! ३४ मिनेट पहिले
कामै सम्पन्न नगरी ७५ लाख भुक्तानी ! ३८ मिनेट पहिले